सोचेझैं काठमाडौं रैनछ ! – Democracy Nepal
१ असोज, काठमाडौं । प्यूठानका हिमाल पुन बिहीबार नयाँ बसपार्कको प्रतीक्षालयमा बसिरहेका थिए । छेउमा पाँचवटा पुराना झोला छरपस्ट थिए ।
मासिक नौ हजार तलबमा होटेलमा काम पनि थालेका थिए । तर, चार महिना पहिले जागिर चैट भयो ।
‘जागिर नभएपछि खानाकै समस्या भयो’, उनले भने, ‘घर फर्कन गाडी पाइन्छ कि भनेर निकै भौतारियौँ । बल्ल आज खल्यो, त्यही भएर घर जान लागेका हौं ।’
पैसा कमाउने भनेर आएका उनले काठमाडौंको लामो बसाइमा सिकेको पाठ यही हो ।
अब गाउँबाट कहिले फर्कने त ? यो प्रश्न भईंमा खस्न नपाउँदै दामोदरले जवाफ फर्काए, नफर्कने ।
Previous कोरोना : हर्ड इम्युनिटीको विकास नभएसम्म वर्षेनी फैलिन्छ ?
Next कैलालीमा ट्रयाक्टर दुर्घटना हुँदा एक जना घाईते